सामुदायिक समाचार नेटवर्क - News Detail - सडकमा घन्कियो नारा : भारतीय दलाल होसियार ! सरकार ढाल्न पाइँदैन
न्यूज अरनिको, बलेफी । Wednesday 08-Jul-2020 08:12 PM
‘देशलाई अस्थिरता चाहिँदैन, सरकार ढाल्न पाइँदैन भन्ने प्ले कार्ड बोकेर प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकहरु सडकमा उत्रिएका हुन । उनीहरुले ‘आजलाई होइन भोलिलाई, स्थिर सरकार ओलीलाई’, ‘सरकारविरुद्धको संगिनी सुई बन्द गर’ र विधिलाई बार्गेनिङ भन्दै प्ले कार्ड बोकेका थिए । प्रदर्शनकारी ‘ओलीको राजीनामा भारतको लागि कि ? नेपालको लागि ?’ भन्दै प्ले कार्डमै कडा प्रश्नसमेत गरेका छन ।